အချို့သောအဓိက distros များ၏နောက်ဆုံး5နှစ် | Linux မှ
အချို့သောအဓိက distros များ၏နောက်ဆုံး5နှစ်
ခေါင်းစဉ်ကအတော်လေးကိုရွေးချယ်ပေမယ့်၊ ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်း Juan Carlos Ortiz ကအောက်ပါ distros တွေကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတာပါ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း5ရှိခဲ့တယ် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္။ GNU / Linux လောကတွင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်သာမကပင်ဂွင်ကြီးများဖြစ်သောပင်ဂွင်းငှက်များပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
distros များ၏အစဉ်လိုက်ကျပန်းမျှသာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရာထူးရာထူးတစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲစနစ်တစ်ခုကိုအခြားတစ်ခုထက် ပို၍ နေရာချရန်ဖြစ်သည်။
အချိန်မရှိခြင်းကြောင့်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုရသေးသောအလွန်အရေးကြီးသည့်အရာဝတ္ထုအချို့ကိုဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်မှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ Arch Linux, Debian, Slackware, Sabayon, PCLinuxOS, Gentoo, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့ကဒီဆောင်းပါး၏ဒုတိယအပိုင်း၌သူတို့ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
1 Ubuntu ကို
3 အနီရောင် ဦး ထုပ်လုပ်ငန်း Linux (RHEL)
7 တော့ openSUSE
2007: Ubuntu 7.04 Feisty Fawn ကိုပထမဆုံးအာရှမိခင်ဘာသာစကားအထောက်အပံ့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ 7.10 Gutsy Gibbon မှထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ubuntu သည် Open Open Client OS အတွက် InfoWorld Bossie ဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏လူကြိုက်များမှုသည် GNU / Linux လောကတွင်တိုးပွားလာပြီးအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်သောကမ္ဘာကြီးအဖြစ်ထင်ရှားလာသည်။
2008: Ubuntu 8.04 Hardy Heron (LTS) နှင့် 8.10 Intrepid Ibex တို့ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ PCWorld က Ubuntu ကို "ယနေ့ခေတ်တွင်အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ဖြူးမှု" အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
2009: Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalop ဖြန့်ချိခြင်း။ ext4 ကို ARM ပရိုဆက်ဆာများအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ဖိုင်စနစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည့်အပြင် Ubuntu Software Center ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည့် Ubuntu Software Center ဖွင့်သည့် 9.10 Karmic Koala, နှင့် package များအားလုံးကိုဗဟိုမှစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုသည်။ ။ ၎င်းဗားရှင်းများသည် Ubuntu သုံးစွဲသူအရေအတွက်ကိုတိုးပွားစေပြီးလူကြိုက်အများဆုံးဖြန့်ချိရေးနေရာကိုပိုမိုနီးကပ်စွာရောက်ရှိစေပြီး၊ တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ ၁၃ သန်းရှိသည်။ ၀ န်ထမ်း ၂၀,၀၀၀ ကျော်သည် Ubuntu ၏အနည်းငယ်သောပြုပြင်ထားသော Ubuntu ကိုနေ့စဉ် သုံး၍ အလုပ်လုပ်ကြသည်။ National Gendarmerie of Italy သည် IT ဘတ်ဂျက်၏ ၇၀% ကိုအလုပ်စခန်း ၅၀၀၀ ကို Ubuntu သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့်ချွေတာသည်။ မက်ဆီဒိုးနီးယားတွင်ပညာရေးနှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာနသည် Ubuntu နှင့်အတူကွန်ပျူတာ ၁၈၀,၀၀၀ ကျော်ကိုကျောင်းများသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
2010: Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LTS) ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် boot time ကိုလျှော့ချရန်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်စင်တာကိုပြန်လည်ပုံစံချခြင်းနှင့်စနစ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထည့်သွင်းသူသည်ဆလိုက်များထည့်သွင်း။ သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဗားရှင်း ၁၀.၁၀ Maveric Meerkat ၏ဖြန့်ချိမှုသည် filesystems သို့ btrfs ကိုထည့်သွင်း။ အသုံးဝင်သောပြissuesနာများနှင့် Unity ၏အမှားများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်ရပ်ရွာလူထုအနေဖြင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အချိန်ယူရ ဦး မည်။ OpenOffice မှ Office suite ကို LibreOffice သို့ပြောင်းသည်။
2011Ubuntu ၁၁.၀၄ Natty Narwhal နှင့် ၁၁.၁၀ Oneiric Ocelote တို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Unity ကို default GUI environment တစ်ခုအဖြစ်ထည့်ပြီး GNOME ကိုအစားထိုးသည်။ Qt တွင်ဖန်တီးထားသော application များနှင့် Qt နှင့် GTK တို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဗဟိုပြုထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဗားရှင်းများစွာကိုဖယ်ရှားပြီးကွန်ပျူတာအမျိုးအစားအားလုံးတွင် Ubuntu ဟူသောအမည်နှင့်ဆာဗာများတွင်အသုံးပြုရန် Ubuntu ဆာဗာကိုသာချန်ထားသည်။ တက်ဘလက်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဖုန်းနှင့်အခြားကိရိယာများအားလုံးတွင် Ubuntu ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းခြင်းကို version 11.04 (.11.10ပြီလ ၂၀၁၄) တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ Cannonical အရအသုံးပြုသူအရေအတွက်သည်သန်း ၂၀ ခန့်ရှိသည်။ သို့တိုင် Ubuntu သည် Distrowatch အဆင့်တွင် Linux Mint ကိုနှစ်များတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အရှုံးပေါ်ခဲ့သည်။ Ubuntu ဆာဗာသည်ဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသော Linux ဖြန့်ချိမှုတွင်စတုတ္ထနေရာတွင်ရှိသည်။
2012: Ubuntu 12.04 တိကျသော Pangolin (LTS) ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ubuntu TV ကို CES တွင်ပြသပြီးရုပ်မြင်သံကြားမှအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးသည်။ Android Ubuntu အတွက်မည်သည့် Android စမတ်ဖုန်းမှမဆို Ubuntu desktop ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။ Windows 8 အတွက် Microsoft ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော UEFI စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ၊ Cannonical သည် FSF ကိုသဘောမတူထိုက်သည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သော့ချက်ကိုတီထွင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ပထမဆုံး Alpha version များရရှိခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေ - Ubuntu ဟာ GNU / Linux လောကကြီးထွားဖို့အတွက်အဓိကရည်ညွှန်းချက်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ၀ င်းဒိုးကိုမငြိစွန်းစေဘဲ Redmond OS အသုံးပြုသူများအဟောင်းများပြောင်းရွှေ့သွားခြင်းသည် Cannonical distro အားအလယ်အလတ်တန်းစားမရှိဘဲဖြတ်သန်းသွားသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်တိုးတက်မှုသည်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုအားပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ Linux ဟာမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရန်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Ubuntu သည်တိုးတက်လာသည်။ hardware အထောက်အပံ့များထပ်မံဖြည့်တင်းခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်များကိုအရောင်တင်ခြင်း၊ အခြားစျေးကွက်များသို့စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားအယွင်းများစွာသည်အစပိုင်း၌အမှားအယွင်းများစွာနှင့်လူအများအားအံ့အားသင့်စေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအားအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ အခြားအသုံးပြုသူများသည် Unity ကိုနှစ်သက်သည်သို့မဟုတ် graphical environment ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အနာဂတျမှာဘာမျှော်လင့်မလဲ Cannonical ၏ဖြန့်ချိရန်ရည်ရွယ်ထားသောအခြားစျေးကွက်များသို့တိုးချဲ့ခြင်းသည် Ubuntu ကိုအကြိုက်ဆုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ချိန်ခွင်လျှာကိုကောင်းစွာပြောင်းလဲစေနိုင်သော်လည်းယနေ့တွင်သုံးစွဲသူအမြောက်အများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီဖြစ်ပေါ်စေမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သင်၏ရပ်ရွာလူထု၏ပံ့ပိုးမှုအပေါ်အကဲဖြတ်မှုပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။
2007: ဗားရှင်း ၂.၂ "Bianca"၊ ၃.၀ "Cassandra"၊ ၃.၁ "Celena" နှင့် ၄.၀ "Daryna" ဗားရှင်းထွက်ရှိလာသည်။ KDE သည်၎င်း၏ packets အားလုံးနှင့် GNOME အတွက်အစားထိုးအဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသောအရေးကြီးသောကိရိယာများ။ mintUpdate နှင့် mintDesktop ကဲ့သို့သော Mint စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်မည့် desktop ကိုအသုံးပြုသူသုံးစွဲသူ၏အလွယ်တကူလောင်းကစားခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Cassandra သည်ထင်ရှားသော "cube" effect နှင့်စားပွဲခုံများကြားတွင်လှည့်ရန်။
2008- ဗားရှင်း ၅ "Elyssa" နှင့် "Felicia" ၆ ခုစတင်ခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအရှိန်အဟုန်ကိုအခြေခံ Linux Mint ဖြန့်ဖြူးသည့် Ubuntu ကဲ့သို့တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။ Elyssa သည်ဘာသာစကားမျိုးစုံပေါင်းထည့်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်။ x5_6 architectures ကိုထောက်ပံ့သည်။ LTS ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ရပ်ရွာထဲတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးများသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။
2009: ဗားရှင်း ၇ « Gloria »နှင့် ၈ « Helena »ဗားရှင်းစတင်ခြင်း။ Gloria သည် ext7 အထောက်အပံ့နှင့်အရေးကြီးသောအနုပညာလက်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Ubuntu နှင့်ကွဲပြားမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုရလွယ်ကူသော distro ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ Helena သည် GDM mintUpdate၊ mintInstall, mintUpload, mintBachup နှင့် Software Manager အတွက်သိသာသောတိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှပစ်လွှတ်မှုတိုင်းတွင်အားသာချက်များဖြစ်လိမ့်မည်။ Grub8 နှင့် OEM ဗားရှင်းများကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်
2010: ဗားရှင်း ၉ "Isadora" LTS နှင့် ၁၀ "Julia" စတင်ခဲ့သည်။ LMDE9ကိုထုတ်ဝေသည်။ Debian Linux Mint ကို 10% Debian နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းအဓိက Mint edition နှင့်မကိုက်ညီသောထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများမှသုံးစွဲသူအရေအတွက်သည်ကြီးမားစွာတိုးပွားလာပြီး Mint သည်လူကြိုက်များလာသည်။ KDE, XFCE သို့မဟုတ် Fluxbox ကဲ့သို့သောအခြား desktop desktop များနှင့် KDE, XFCE သို့မဟုတ် version များကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည် (ယခင်ကထိုပတ်ဝန်းကျင်၏ "community" version များရှိခဲ့သော်လည်း)
2011GNOME 11 ဖြန့်ချိခြင်းကအစပိုင်းတွင်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော“ Katya” ဗားရှင်း ၁၁ ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ GNOME3ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုထိန်းသိမ်းရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ OpenOffice ကို LibreOffice ဖြင့်အစားထိုးသည်။ အဆုံး၌ Katya သည် Mint သမိုင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီး၎င်းကိုဆက်ခံသူမှကျော်တက်။ မရနိုင်ပါ။ ဗားရှင်း ၅ Elyssa သည် LTS အနေဖြင့်သူမ၏ဘဝအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အကုန်တွင် "Lisa" ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် MOME ကို GNOME 2. အစားထိုးရန်ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းသည်။ LMDE5နှင့် 12 ကိုစတင်ခြင်း။ Linux Mint developer အဖွဲ့သည် GNOME3၏ fork Cinnamon ကိုတရားဝင်ဖွင့်သည်။ အခြားဖြန့်ဝေမှုများအတွက်ရရှိနိုင်သည့် Fedora, Ubuntu, OpenSUSE သို့မဟုတ် CentOS ။ Linux Mint သည် Ubuntu ကို Distrowatch ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာမျက်နှာကြည့်ခြင်းနေရာတွင်အစားထိုးလိုက်ပြီး Mint ၏လူကြိုက်များမှုတိုးပွားလာသည်။ နှစ်များအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ် Ubuntu ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်
2012: version 13 "Maya" နှင့် LMDE 201204. ကိုစတင်ခြင်း CompuLab နှင့်ပူးပေါင်းပြီး MintBox သည် modem အရွယ်အစားနှင့် operating system ကဲ့သို့ Linux Mint ပါ ၀ င်သည့်ကွန်ပျူတာသေးငယ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ မာယာတွင် MDM ပါ ၀ င်ပြီး GDM ကို login manager အဖြစ်အစားထိုးသည်။ ၎င်းကိုစတင်ပြီးတစ်လအကြာတွင်အဖွဲ့အစည်းများက၎င်းကို "GNU / Linux လောကတွင်အကောင်းဆုံးစနစ်ကျပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်" ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဗားရှင်း 14 ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် code name မရှိပဲ Ubuntu 12.10 ကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Linux Mint သည် distap သည် heap တစ်ခုမှမည်သို့ကျော်ကြားမှုအများဆုံးဖြန့်ချိမှုထိပ်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်သည်ကိုကောင်းစွာပုံဖော်သည်။ အစ၌ Mint သည်ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုသာဖြစ်သည်ကိုမမေ့ဘဲ! ၎င်းသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Ada, version5ဖြစ်ပြီးငယ်ရွယ်သေးသည့် distro အတွက်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည်။ အချို့က Mint ၏လက်ရှိအခြေအနေသည်ငြင်းပယ်မှုကြောင့် Ubuntu မှသုံးစွဲသူများကိုရွှေ့ပြောင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် Unty မှဤသည်မှာ Mint ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်လုံးဝမမှန်ပါ။
Multimedia နှင့် java codecs၊ စံနမူနာမပြနိုင်သော LiveCD၊ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တို့ပါ ၀ င်ရန်အသုံးပြုသူများသည် Mint ကိုနှစ်အနည်းငယ်အထိမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာငါ GNOME ကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တတိယမြောက်ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိလိုက်တာနဲ့ Cinnamon နဲ့ MATE ကိုဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အဲဒီနှစ်ခုရဲ့ဒုတိယ version မှာ GNOME ရဲ့အနှစ်သာရကိုတိကျတဲ့နည်းနဲ့ထိန်းသိမ်းဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် developer များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏သုံးစွဲသူများနှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုရှိစေရန်သေချာစေသည်၊
ရှေ့သို့သွားသောအခါ Mint သည်၎င်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသင့်သည်။ ၎င်း၏ distro ကိုရိုးရှင်း။ အစွမ်းထက်စေပြီးသုံးစွဲသူများကိုပျော်ရွှင်စေသည်။ ၎င်းသည် Ubuntu ကဲ့သို့လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုနှုန်းမရှိသော်လည်း၎င်း၏ဖြန့်ဖြူးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် Cannonical စနစ်ကိုမနာလိုစရာဖြစ်နေသည်။
အနီရောင် ဦး ထုပ်လုပ်ငန်း Linux (RHEL)
2007: Version5ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ Jim Whitehurst က Red Hat ဥက္ကPresident္ဌနှင့်စီအီးအိုကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ Matthew Szulik သည် Red Hat ဥက္ကPresident္ဌအဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ စတုတ္ထနှစ်တွင် Red Hat သည် Most Trusted Software Vendor ဖြစ်သည်။ RHEL 5.1 ကိုလွှတ်လိုက်ပါပြီ
2008: RHEL5သည်တစ်နှစ်တာကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်ရွှေဆွတ်ခူးရသည့် SearchEnterpriseLinux.com မှ Linux Server Distributions အမျိုးအစားမှရွှေကိုအနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ Red Hat သည် Forbes စာရင်းတွင်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီ ၂၅ ခုတွင်ပါဝင်သည်။ Channel Insider မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွက် Red Hat Enterprise Linux ထုတ်ကုန်ကိုနာမည်ပေးခဲ့သည်။ RHEL ၅.၂
2009: RHEL 5.3 ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ RHEL 5.4 ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Xen virtualization နည်းပညာနှင့်အတူ kernel-based virtual machine (KVM) virtualization နည်းပညာကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် RHEL နှင့် Windows ကိုကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးမှအပြည့်အဝထောက်ခံမှုရပြီး host သို့မဟုတ် host အဖြစ် virtualization မှတဆင့်အတူတကွဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။
2010။ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မိုးတိမ်တွင်ဗဟိုပြုမည့်အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားရန်အထောက်အကူပြုသော version6။ Red Hat Cloud Access သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုသူတို့၏ RHEL subscriptions ကို Cloud သို့လွယ်ကူစွာနှင့်လွယ်ကူစွာချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
2011- ဗားရှင်း ၆.၁ နှင့် ၆.၂ ကိုစတင်ခြင်း၊ virtualization records နှင့်စီးပွားဖြစ် SAP ထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်း။ 6.1 သန်း RHEL subscriptions ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်
2012- Red Hat က ၇ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိ RHEL5နှင့်6ကိုထောက်ခံမှုတိုးချဲ့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Microsoft7၀ င်းဒိုး Windows 10၊ Red Hat နှင့် Cannonical တို့မှအကောင်အထည်ဖော်သော UEFI စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများသည်မတူညီသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာRed Hat ၏ကွန်ပျူတာစျေးကွက်တွင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ သို့သော်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကဲ့သို့မာနထောင်လွှား။ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားခြင်း မှလွဲ၍ Red Hat သည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖောက်သည်များအားပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့်ဤအရည်အချင်းကိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်ဤအရည်အချင်းပြည့်မီသောလက်မှတ်နှင့်မှတ်တမ်းများကိုစိတ်ကူး။ ပင်မရနိုင်ပါ။ ၎င်းတွင်ရှိသည့်ဖောက်သည်အရေအတွက်မှာ (ကျွန်ုပ်တို့အတွက် NASA နှင့် IBM ကိုသာဖော်ပြရန်လုံလောက်သည်) RHEL ကိုဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုသူများသည်အလျင်အမြန်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်မှန်သော်လည်း၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အပံ့၊ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် Linux ကမ္ဘာတွင်အကောင်းဆုံးသောစနစ်များရှိသည့်ကြီးမားသောအရည်အသွေးဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
၎င်းသည်လုံခြုံရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအများဆုံးလိုအပ်သောနေရာတွင်ရှိသောကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Desktop စက်မှုလုပ်ငန်းများသည်ခုန်ပျံကျော်လွှား။ မတက်နိုင်သော်လည်း Red Hat သည်ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
2007။ Fedora7"Moonshine" ကိုထုတ်ဝေလိုက်သောအခါ Core နှင့် Extras repositories တို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ package များကိုစီမံခန့်ခွဲရန် tool အသစ်တစ်ခုနှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ Version 8 "Werewolf" ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Iced Tea, Codec Buddy နှင့် Pulse Audio တို့ပါဝင်သည်။ Fedora သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Pulse Audio ကိုပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ဖြန့်ချီမှုဖြစ်လာတယ်။
2008: Fedora9"Sulfur" သည်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏တိုးတက်မှုများကိုပေးသည်။ Fedora 10 « Cambridge »သည် Plymouth bootloader ကို RHGB (Red Hat Graphical Boot) နေရာတွင်အစားထိုးလိုက်သည်။
2009: ဗားရှင်း ၁၁ "Leonidas" သည် system startup နှင့် shutdown ချခြင်း (စက္ကန့် ၂၀ ကြာအောင်အသုံးပြုသူထည့်သွင်းခြင်းသို့)၊ လက်ဗွေစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အကူပြုအထောက်အပံ့၊ yum နှင့် packagekit တိုးမြှင့်မှုများနှင့် ext11 ဖိုင်စနစ်များအတွက်အဓိကတိုးတက်မှုများကိုဆောင်ကျဉ်းပေးသည်။ Fedora 20 "Constantine" သည် grub သို့အဓိက update ကိုထပ်ဖြည့်သည်။ ၄ င်းသည် ext4 partitions များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းကိုယခင်ကထည့်သွင်းထားသော်လည်း system ကို install လုပ်သည့်အခါ grub သည် ext12 / ext4 အခန်းကန့်ကိုဖန်တီးသည်။ အာရှဘာသာစကားများကိုအပြည့်အဝထောက်ခံမှုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
2010: Fedora 13 "Goddard" သည် Nvidia ကတ်များအတွက် 30D တိုးတက်မှုများနှင့်အထုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု ၃၀% အထိတိုးတက်စေသည့် RPM update ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ version3"Laughlin" ကို Amazon EC14 cloud တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိဗားရှင်းများမှဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော feature တစ်ခုဖြစ်ပြီး developer packages များနှင့် system libraries များသို့အဆင့်မြှင့်ခြင်းများပါဝင်သည်။
2011Fedora 15 "Lovelock" ၏ Fedora ထုတ်လုပ်မှုသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းတိုးတက်မှုအမြောက်အမြားပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူနံပါတ်များများပြားလာခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသောမီဒီယာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ Free Office တွင် Open Office၊ virtualization tools များ၊ XFCE နှင့် LXDE အပါအ ၀ င် graphical enviromours update၊ system file system တိုးတက်မှုနှင့်မြန်နှုန်းတို့အစားထိုးသည်။ Fedora 16 "Verne" သည်မိုးတိမ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန် tools များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ Grub2သို့မွမ်းမံမှုများဖယ်ရှားပြီး HAL ကိုဖယ်ရှားသည်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်ပြီး kernel ကို ၃.၁.၀ သို့အဆင့်မြှင့်သည်။ Ask Fedora ဟုခေါ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုစတင်သည်။ ၎င်းသည်ရပ်ရွာလူထုမှမေးခွန်းများနှင့်သံသယများကိုဗဟိုပြုရန်ပေါ်တယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများကိုယ်တိုင်ဖြေကြားနိုင်သည်။
2012နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းမှာ Beefy Miracle 17 ဖြစ်ပြီး kernel 3.4.1, GNOME 3.4, KDE 4.8၊ Network Managaer တိုးတက်မှု၊ touch screen များနှင့်လိုက်ဖက်မှုနှင့် iptable အစားထိုး firewalld တို့ဖြစ်သည်။ ထောက်ခံမှုရဆဲဖြစ်သောမူကွဲများသည် ၁၆-၁၇၊ Fedora 16 "Spherical Cow" ကိုယခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေ - Fedora ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့“ Freedom ။ ချစ်သူ။ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ” နှင့်၎င်းသည်၎င်းဝန်းကျင်နှင့်ဆက်နွယ်သည်။ Red Hat မှပေးသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို အခြေခံ၍ Fedora သည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်၏အားသာချက်များကိုခံစားနိုင်ပြီးကြီးမားသောသာယာသောအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အထောက်အကူပြုကိရိယာများစွာရရှိနိုင်သောရပ်ရွာလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Fedora ၏တိုးတက်မှုသည်အခြားဖြန့်ဝေမှုများကဲ့သို့လျင်မြန်စွာမပေါက်ကွဲနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်း၏တိုးတက်မှုသည်ဘယ်သောအခါမျှမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူတိုးတက်ကောင်းမွန်နေပြီး၊ ၉ နှစ်ကြာသောနောက်၊ GNU ကမ္ဘာတွင်အရေးအပါဆုံးဖြန့်ဝေမှုတွင်နေရာတစ်ခုကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားသည်။ / Linux ။ အခွားသောဖြန့်ဝေမှုများအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ဝေဖန်ခံရသည့်အချက်များအနက်တစ်ခုမှာမူတစ်ခုချင်းစီအတွက်ပေးသောအလွန်တိုတောင်းသောအထောက်အပံ့သံသရာနှင့်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်းဖိုင်စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားဖိုင်စနစ်သို့ပြောင်းလဲမှုအချို့ စနစ်ကလိုက်ဖက်တဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်စေရန်။
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာ Fedora သည်နေအိမ်၌မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ ရပ်ရွာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Spins, Formats နှင့် Desktops များအကြားတွင်ရွေးချယ်မှုများရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြီးထွားမှုသည်ပိုမိုကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်နှစ်များအတွင်းစုဆောင်းထားသည့်အောင်မြင်မှုကိုဆက်လက်ရရှိလိမ့်မည်။
2007- Mandriva 2007 (၂၀၀၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အမှန်တကယ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်) သည်သုံးစွဲသူအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ကာလူကြိုက်များမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ USB ဖြန့်ဖြူးရေးပုံစံများ (Mandriva Flash) နှင့် LiveCD စသည့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။ ဗားရှင်း 2006 သည်ပထမ ဦး ဆုံး“ Spring” ဖြစ်ပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာကို ၆ လအထိပြောင်းလဲပေးသည်။ Compiz နှင့် Beryl, MandrivaUpdate, MandrivaOnline နှင့် DrakRPM တို့ပါဝင်သည်။ Mandriva 2007.1 သည် transfugedrake အသစ်ဖြစ်သော Windows / Linux ကူးပြောင်းခြင်း tool ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
2008: ဗားရှင်း 2008.1 သည် Windows Vista ကိုရွှေ့ပြောင်းရာတွင်ကူညီခြင်းဖြင့်ဤအထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်စေသည်။ 2009.0 ထွက်ရှိမှုတွင် hardware support နှင့် KDE နှင့် LXDE တို့နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပေါင်းစပ်မှုတို့ပါဝင်သည်။ ဤသည်နှင့်နောက်တစ် ဦး ကိုရပ်ရွာကအကောင်းဆုံးသမိုင်းဆိုင်ရာဗားရှင်းမဲပေးခဲ့ကြသည်။
2009: Mandriva 2009.1 သည် ext4 အထောက်အပံ့နှင့် Speedbot နည်းပညာအသစ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Adelie ဟုခေါ်သော ၂၀၁၀ ဗားရှင်းတွင်တိုးတက်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲများပြည့်နှက်နေသည် - ပိုမိုလုံခြုံမှု၊ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှု၊ account ည့်အကောင့်ထည့်သွင်းခြင်း၊ Linux Mobile ဗားရှင်းနှင့်ပိုမိုပေါင်းစည်းခြင်း၊ URPM နှင့် urpmi တိုးတက်မှုများ
2010ဖြေ 2010.1 ("Farman") ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းကသိသိသာသာတိုးတက်မှုများမရရှိပါ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာဖြတ်တောက်ခံရပြီးတစ်နှစ်အကြာတွင်ပြန်လည်ရပ်တန့်သွားပြီး distro ကိုရပ်တန့်ပြီး update များကိုသာထုတ်ပြန်သည်။ Mandriva ရောင်းချမှုနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများသည် (အဓိကအားဖြင့်ဘရာဇီးနှင့်ပြင်သစ်အခြေစိုက်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများ) ၏ ၀ န်ထမ်းများအလုပ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီးရပ်ရွာလူထုအားမရေရာမှုဖြစ်စေသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအသစ်ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူအခြေအနေကအေးဆေးငြိမ်သက်သွားသည်။ အချို့သော developer များသည်ခွဲထွက်ပြီး Mageia ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသုံးစွဲသူများနှင့်အတူ၎င်း၏နောင်တော်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစတင်ခဲ့သည်။
2011- ၂၀၁၁ ခုနှစ်၏ပထမ RC.2011.0 (“ ဟိုက်ဒရိုဂျင်”) သည်မျှော်လင့်ချက်အသစ်တစ်ခုကို Mandriva ကိုပြန်လည်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင် MandrivaSync သည်ထင်ရှားသောအချက်အလက်များပါဝင်ပြီးဒေတာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ဝန်ဆောင်မှု။ ယခုနှစ်အကုန်တွင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကြီးမားသောစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်အဖြေများကိုမတွေ့ပါကအမြင့်ဆုံးလေလံဆွဲသူအားရောင်းချမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုရုပ်သိမ်းရန်ခြိမ်းခြောက်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
2012ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏“ အပြီးသတ်” ပြီးနောက်ဒေဝါလီခံမှုကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။ developer အချို့သည် ROSA မာရသွန် ၂၀၁၂ Mandriva ၏ fork အသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အလင်းရောင်အသစ်ရှိလင့်ကစား Edge-IT သည် developer များစွာကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်သောလက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ၏သေခြင်းကြောင့်နုတ်ထွက်သွားသည်။ Mandriva ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။ အုတ်မြစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ရပ်ရွာသို့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။ ၂၀၁၂ ဗားရှင်း၏“ Tech Preview” ကို“ Bernie Lomax” ဟုခေါ်သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည်ဖြန့်ဖြူးမှု၏အမည်အသစ်ကိုရွေးချယ်ရန်ပွင့်လင်းသောအွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: Mandriva ၏စွမ်းအားပြည့်လည်ပတ်မှုနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဖြန့်ချိမှုတစ်ခုအဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲနောက်ကွယ်တွင်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပုံရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က၎င်းသည်အကောင်းဆုံး Linux ဖြန့်ချိမှု၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုအနက်မှအငြင်းပွားဖွယ်မရှိသောတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ပြောင်းလဲနေတဲ့လှိုင်းတွေပင်လယ်ထဲမှာမျောနေပုံရသည်။ Mandriva သည် hardware support သို့ရောက်သောအခါမည်သို့တီထွင်ရမည်ကိုသိသည်။ ၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု၏အများစုမှာကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသော distro၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ကိရိယာများနှင့်၎င်း၏ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်သောကြံ့ခိုင်မှုတို့ပါဝင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားရပ်ရွာလူထုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်အခြေအနေကိုကောင်းစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့၏ကသောင်းကနင်းနိုင်သောကာလများအတွင်းသုံးစွဲသူများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆက်လက်ရရန်အတွက်အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးယနေ့တည်ရှိနေသောကောင်းမွန်သောအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြန်လည်ရယူရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ယခုအချိန်တွင်ယခုနှစ်သည် Mandriva ၏သမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးအချက်များဖြစ်ဖွယ်ရှိသည့် ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တို့၏ဂုဏ်ကျက်သရေကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဤအောင်မြင်မှုရရှိသည်ဖြစ်စေမဖောင်ဒေးရှင်းသစ်နှင့်ရပ်ရွာလူထုကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်ဤခမ်းနားထည်ဝါသောဖြန့်ဖြူးမှုကိုဝန်းရံထားသည့်မတည်ငြိမ်မှုများကိုတည့်မတ်ပေးနိုင်မလားပေါ်တွင်မူတည်သည်။
2010ဖြေ - အောက်တိုဘာလမှာ Mandriva developer ဟောင်းအုပ်စုနဲ့အသုံးပြုသူအချို့က Mageia ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတည်ထောင်လိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Edge-IT ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းသတင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ အုပ်စုသစ်သည်နာမည်တူ distro တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီး၊ သူတို့သည်ကုမ္ပဏီ၏ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်မှီခိုလိုခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အသိုင်းအဝိုင်းအလုပ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ခိုင်မာသောစံပြသတ်မှတ်ထားသည်
2011- Mageia 2011 ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သငျသညျခိုင်မာတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းတည်ဆောက်နှင့်သင်အသုံးပြုသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်တွေအများကြီးရ။ ဗားရှင်းတစ်ခုစီအတွက် ၁၈ လထောက်ခံမှုဖြင့် ၉ လဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာကိုတည်ထောင်သည်
2012ဖြေ - ဒုတိယဗားရှင်းရဲ့ alpha နဲ့ beta ဗားရှင်းတွေထွက်လာတယ်။ Mandriva အသိုင်းအဝိုင်းအားပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက် Mageia သည်သူ၏အကူအညီကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးပူးပေါင်းစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ Mageia developer များကထိုဖိတ်ကြားချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Mageia2၏နောက်ဆုံးလွှတ်တင်မှုကိုပြုလုပ်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုနှင့်သိုလှောင်ရုံများတွင်အထုပ် ၁၀,၀၀၀ ကျော်ကျော်လွန်သည်။ Mageia 10.000 အတွက်အစီအစဉ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၃ နှစ်သာသမိုင်းရှိသော်လည်း Mageia သည်ဤစာရင်းတွင်နေရာရရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့်ပြrနာအမျိုးမျိုးကြောင့် distro သည်အန္တရာယ်ရှိနေချိန်တွင် Mandriva ကိုချက်ချင်းဆက်ခံသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုပconflictိပက္ခမှရှောင် ထွက်၍ Mageia ဖောင်ဒေးရှင်းသည်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လုံးဝပွင့်လင်းသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ကိုတီထွင်ရန်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Mageia သည်အလွန်ကောင်းသောဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယဗားရှင်းသည်ပြfirstနာများစွာကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သိုလှောင်ရာနေရာများရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်စာရင်းနှင့်ထောက်ပံ့ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲများစွာကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် graphical environment တစ်ခုတည်းသာမဟုတ်သော်လည်း KDE သည် Mageia နှင့်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုပြီးပိုမိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
အရာအားလုံးက Mageia သည်သုံးစွဲသူအသစ်များကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်ပြီးဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်ပိုမိုအာရုံစိုက်မည်ဟုဖော်ပြသည်။ ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသော်လည်းသုံးစွဲသူ ဦး ရေကိုအဆတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် Mandriva ၏မကောင်းသောအချိန်ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
2007အောက်တိုဘာ ၁၀.၃ တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော download package သည် 10.3-Click Install အတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ Fluendo MP1 အတွက်တရားဝင်ပံ့ပိုးမှုနှင့်တင်ပို့ချိန်များတွင်တိုးတက်မှုများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။
2008ဗားရှင်း ၁၁.၀ သည်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့်မတူညီသောစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာအမြောက်အများကိုစတင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ တိုးတက်မှုများစနစ်အမြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လုပ်နေကြသည်။ OpenSUSE 11.0 ကိုယခုနှစ်အကုန်တွင်ရနိုင်သည်။ ထိုနောက်တွင်မူလွှတ်ပေးမှုများကိုရွှေ့ဆိုင်းပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌မွမ်းမံမှုများသာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
2009နိုဝင်ဘာလတွင်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ၁၁.၂ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၄ င်းသည်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများဖြစ်သည့် ext11.2 နှင့် PowerPC၊ KDE တို့ကိုအဓိက graphical environment အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ GNOME ကို optional အဖြစ်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ အင်တာနက်မှတဆင့်တပ်ဆင်ဖိုင်များကျန်) ။
2010OpenSUSE 11.3 ကိုဇူလိုင်လမှာဖြန့်ချိခဲ့တယ်။ အသုံးပြုသူတွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကွန်ပျူတာနည်းအရအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အများဆုံးဗားရှင်းဖြစ်တယ်။ netbook လိုက်ဖက်တဲ့တိုးတက်မှု၊ ပေါ့ပါးတဲ့ desktop environment ၂ ခု (Meego on OpenSUSE နှင့် KDE's Plasma Netbook Workspace)၊ btrfs နှင့် JFS အတွက်စမ်းသပ်မှုအထောက်အပံ့၊ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ပံ့ပိုးမှု၊ ဆာဗာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများအပြင် ၄ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင် (KDE, GNOME) XFCE, LXDE) ပေါင်းပညာရေးဗားရှင်းအသစ်။
2011- အထုပ်အသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်နှင့်အတူဗားရှင်း ၁၁.၄ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့သော version 11.4 ။ နောက်ဆုံးဗားရှင်း၏တိုးတက်မှုများအရ Open Office ကို Libre Office အစားထိုး KDE ရှိ Plasma, WebYaST နှင့် OwnCloud တို့ကကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် YaD GUI ကို KDE ပေါ်တွင်အရောင်တင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
2012။ ဗားရှင်း ၁၂.၂ ထုတ်ပြန်မှုသည်နှောင့်နှေးနေပြီးလူထု၏မကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့တိုင်ဗားရှင်း ၁၂.၁ ၏ဒေါင်းလုပ်အရေအတွက်တိုးများလာသည်။ 12.2 ၏ RC ကိုလက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြေ - OpenSUSE သုံးစွဲသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးမှုရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ချို့ယွင်းချက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာပြီးပြည့်စုံပြီးဖော်ရွေတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီ။ ဤအခြေအနေများရှိနေသော်လည်းထိ မိ၍ လဲနိုင်သောသေးငယ်သည့်လုပ်ကွက်များသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ရပ်တန့်နေပုံရသော်လည်းဤအချက်သည်လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။
OpenSUSE သည် GNU / Linux လောကတွင်အသုံး ၀ င်မှုကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် polishing မလိုဘဲလုံခြုံစိတ်ချရသည့်စနစ်တွင်ထင်ဟပ်နိုင်သည့်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောတင်ဆက်မှုကိုတင်ပြခြင်းအတွက်လေးစားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားသော Desktop များ၊ Factory နှင့် Tumbleweed ဌာနခွဲများနှင့် SUSE စတူဒီယိုများမှတဆင့်အသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများစွာကိုတင်ပြခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်၎င်းတို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုသူတို့ကြိုက်သလောက်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးရှိသည်။ distros အများစုတွင်မတွေ့ရသောဤလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲခွင့်သည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏နေ့စဉ်တိုးတက်မှုကိုအားပေးသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အဓိကဖြန့်ဖြူးခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း OpenSUSE သည်အမြဲတမ်းရှေ့တန်းတွင်ရှိပြီး GNU / Linux လောကမှပေးသောအောင်မြင်မှုနှင့်အားသာချက်တို့၏နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အချို့သောအဓိက distros များ၏နောက်ဆုံး5နှစ်
Jaume တောရက်စ် အော်တီဂါ ဟုသူကပြောသည်
ကိုယ့် kubuntu ကိုသုံးလလောက်သုံးပြီး Linux အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်တာကြောင့်အခြားဖြန့်ဖြူးခြင်းသို့ပြောင်းရန်စဉ်းစားနေလျှင်၊ ငါ့ကိုဘာအကြံပေးမလဲ
Jaume Torres Ortega သို့စာပြန်ပါ
Juan Pablo Jaramillo Pineda ဟုသူကပြောသည်
လုံးဝသဘောတူသည်။ Debian GNU / Linux ကဘယ်လိုနေသလဲ။ ဦး ဦး
Juan Pablo Jaramillo Pineda အားပြန်ပြောပါ
Joshua Aquino ဟုသူကပြောသည်
Debian နှင့် Arch လား။ 😐
Josue Aquino သို့ပြန်သွားပါ
Arch သည်နာကျင်မှုမရှိသော်လည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့်ဘုရားများအားလုံးကိုအပ်နှံရန်နှင့်သင်၏လက်ချောင်းများကိုဖြတ်ကျော်ရန်အတွက် update တစ်ခုချင်းစီနှင့်အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏အလွန်ကောင်းသောဝီကီနှင့်ဖိုရမ်ကိုသုတေသနလုပ်ရန်အချိန်ရှိသူများအတွက်မူအဆင်ပြေသည်။
Mageia သည်၎င်း၏ကြေငြာခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်စာရင်းပြုထားသည်။ သင်ဖော်ပြသည့် distro ကိုပင်မထုတ်ပြန်လျှင်၎င်းသည် GNU / Linux ကမ္ဘာကြီးအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ဟုသင်မည်သို့မျှော်လင့်နိုင်သနည်း။ သင်၏အမြင်ရှုထောင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ၎င်းသည်ဤအရာများပါ ၀ င်ခြင်း (သို့) ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်ခုအမှန်ရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရုံမျှသာဖြစ်သည်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖြစ်သည်။ ရွှင်လန်း!
ဤသူသည် Mageia ၏လှပသောပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလေးချိန်ရှိသောအလေးချိန်ရှိသောအရာဝတ္ထုများအကြောင်းပို့စ်တင်ရန်နှင့် ၁ ... xD ကိုယူပြီးတစ်ဝက်မျှသောအကြောင်းရင်းမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစပြီး am geia ကို distro ၏သက်ရောက်မှုကိုရေတွက်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့စတင်မည်နည်း။ ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်ကတည်းကမဟုတ်ဘဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကနေ။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် distro Indio Linux ကိုထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုသည်။ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ် xDD ကိုမဖြန့်ချိသေးပါ (အမြီးအမောက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုအပ်ပါသလား။ )
ajajajaj သင် amgeia5နှစ်ရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ maniulan xD..mageia ကဲ့သို့ pff တွင်အတိတ်မရှိသေးပါ၊ ၎င်းတွင်အနာဂတ်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် distro အတွက်အခမဲ့ကြော်ငြာဖြစ်သည်
သငျသညျ APT ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ဤကဲ့သို့သောပေမယ့်နှင့် graphical interface ကိုအားဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လျှင်, Linux Mint သို့မဟုတ် Debian ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Distros ကဏ္ Section ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Septenrion Zoster ဟုသူကပြောသည်
ငါ Mandriva နှင့်နောက်ပိုင်း Mageia ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ ၉ လနီးပါး Mageia နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူတို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အညီသူတို့သည်ကွန်ယက်များ၊ ဗွီဒီယိုနှင့် mp9 အသံယာဉ်မောင်းများတွင်အလွန်လေးနက်သောပြproblemsနာများဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအစကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Mageia Latina အသိုင်းအဝိုင်းသည်အကူအညီမပေးသောမာနထောင်လွှားသူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကလပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ Mandriva (သို့) Mageia ကိုသူတို့မပြောသင့်ဘူး။ ၎င်းတို့သည်အကျိုးခံစားခွင့်များထက်ပြproblemsနာများပိုမိုများပြားလာသော distros များဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင်ဟာအင်တာနက်ကိုမစစ်ဆေးပါကဒီ distro ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွန်ယက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုအခါအသိုင်းအဝိုင်းက 'ဟဟာဟာဟာကွန်ရက်တွေကိုထုတ်လွှင့်တာသိပ်မများပါဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်အရံပစ္စည်းတွေကိုမသိဘူး၊ qt ကအသံနဲ့ဗွီဒီယိုပြproblemsနာတွေဖြစ်စေတယ်' လို့ပြောဖို့သာကန့်သတ်ထားသည်။
Septentrion Zoster အားပြန်ပြောပါ
ငါ Ramon ကိုသဘောတူတယ်၊ ဒရော့ဘ်စတာ၏မိခင် Debian အကြောင်းပြောကြစို့ ...
23/07/2012 13:28 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
၁- ဆောင်းပါးသည်အစတွင် distros များပိုမိုပါ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်သော်လည်း၊ facu တွင်အလုပ်များနှင့်အခြားအရာများကိုသယ်ဆောင်ရန်အချိန်ကာလဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအလှည့်အပြောင်းများကိုရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ ပါပလိုကပြောကြားသည်မှာအစတွင်သူပျောက်ဆုံးနေသောအရာများကိုသူရှင်းလင်းခဲ့ပြီးဒုတိယအပိုင်းကိုပျောက်ဆုံးနေသောဖြန့်ကျက်သူများနှင့်ရေးသားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ရှည်ဖို့သာတောင်းဆိုသည်။
၂- လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကအဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤကာလသည်ဤ distros များ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်၎င်းတို့ GNU / Linux လောကအပေါ်မည်သို့သြဇာသက်ရောက်ပုံကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်အချက်အလက်မကြာခဏရှားပါးပြီးရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရနိုင်သည်။
3- Mandriva တွင်ပါဝင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေရှိပေမယ့် ITS TRANSCENDENCE မတိုင်မီကဖြစ်သည်။ Mageia သည်၎င်း၏ "ဆက်ခံသူ" ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများစွာမရှိသော်လည်း၎င်း၏အရေးပါမှုမှာမကြာသေးမီကရရှိခဲ့သောအောင်မြင်မှုများနှင့် Mandriva နှင့်နှစ်ရှည်လများဆက်ဆံရေးကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄) Linux Mint သည် Ubuntu ကဲ့သို့သော transcendent distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၌၎င်းသည် UST QUOTA တွင် UBUNTU ထက်ကျော်လွန်သော Ubuntu ဟုအတိအကျပြောခြင်းမရှိသော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်“ Ubuntu ကိုကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာအမြင်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်အစားထိုးခဲ့သည်။
Mint ၏တိုးပွားလာသောလူကြိုက်များမှုကိုသက်သေပြ Distrowatch ။ အသုံးပြုသူများအရေအတွက်နှင့်မတူပါ။ distro တစ်ခု၏လူကြိုက်များမှုသည်ဘလော့ဂ်များ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ၊ အသုံးပြုသူများဖိုရမ်များ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သောဖော်ပြချက်များကြောင့် distro သည်လူကြိုက်များနိုင်သည်။ အသုံးပြုခအခကြေးငွေကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ARCH အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ဘလော့ဂ်ကဲ့သို့အထူးပြု Linux မီဒီယာအများစုတွင်ဖော်ပြဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ရေပန်းစားသည်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည် recognize distro တစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုအကြားအသုံးပြုမှုအချိုးသည်နက္ခတ္တဗေဒကွာဟမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးကာလတိုတွင်၎င်းကိုလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ ငါဖိုရမ်အများအပြားတွင်“ ငါ Ubuntu အသုံးပြုသူဖြစ်သောကြောင့်ယခုငါမကြိုက်ဘူးယူနိုက်တက်ပါ ၀ င်သောကြောင့်ငါ Linux Mint ကိုကြိုးစားနေသည်” ဟူသောပုံမှန်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲမှတ်ချက်များကိုတွေ့ခဲ့ရပြီး၎င်းသည်အတည်ပြုသည် Ubuntu မှ Mint သို့သွားလိုသည့်သဘောထားရှိပြီးယနေ့ Mint ကပြုလုပ်သောဆူညံသံကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည် Mint သို့မဟုတ် Ubuntu သည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်လူကြိုက်များမှုနည်းပါးကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
5- Debian သည်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သော်လည်းသတင်းအချက်အလက်သိပ်မတွေ့ရှိရသေးသောကြောင့်၎င်းဆောင်းပါးအားရရှိနိုင်သည့်အရာများနှင့်ပိတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့“ မိခင်” ပြdistနာဖြစ်ပြီးဒီဆောင်းပါးရဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဖြစ်သင့်ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့။
၆။ Linux ကို Ubuntu ဖြင့်စတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် Linux Mint သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Mint အပြင် Fedora နှင့် OpenSUSE တို့ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ ခဏလောက် Mageia ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှတစ်ခုချင်းစီတွင် ၄ င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိကြောင်း၊ ယေဘူယျအားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ အနိုင်ရသူမရှိကြောင်း၊ ဤနှစ်များအတွင်းအနှောက်အယှက်တစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုဆန်းစစ်။ ၎င်းတို့၏လက်ရှိအခြေအနေကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ။
၇။ Ubuntu နှင့် ပတ်သက်၍ မူ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အသုံးမပြုသော်လည်းလူကြိုက်များမှုသို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်အရေးပါမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်းမပြုခြင်းသည်ကောင်းသောအနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး၌ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများက၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရွေးချယ်သည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ (Ubuntu TV, Android အတွက် Ubuntu) စသည်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
၈။ ရေးသားထားသောအရာသည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်နှင့်မည်သူမဆိုသဘောမတူနိုင်ပါ၊ လူတိုင်းတွင်မှန်ကန်သောအမြင်နှင့်အမြင်ရှိသည်😀
ဆောင်းပါးရေးသားပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Mint သည် Ubuntu ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လူကြိုက်များခြင်းတို့ထက်သာလွန်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် Linux Mint သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးသောဝေစုဖြစ်သည်ဟုသူတို့ဘာတွေပြောနေကြသနည်း။ သောကြောင့် Distrowatch စာရင်းဇယားများကြောင့်? အမှန်တရားနှင့်ကျွန်ုပ်မှားယွင်းနေသည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်မျှမတွေ့ရပါ။ Linux Mint သည် Ubuntu ထက်ပိုသောသုံးစွဲမှုခွဲတမ်းကိုရိုးရိုးသားသားသံသယဖြစ်မိသည်။ Steam ကဲ့သို့သတင်းများကိုကြည့်ပါ။ Ubuntu ကိုကြိုတင်မှာယူရန်ထုတ်လုပ်သူများထံမှသတင်းများကိုကြည့်ပါ။ -installations, အခြားသူများအကြား Ubuntu ကို TV အကြောင်းကိုသတင်း။
Linux Mint သည်ကောင်းပြီးအဓိက desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များပေးသောအခြေခံပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမှမသိလိုသောသုံးစွဲသူများကိုမည်သို့ဆွဲဆောင်ရမည်ကိုသူတို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ငါမသေချာပါ။ (Mint ၏ Firefox ပင်တောင်မှအမှတ်အသားတစ်ခုယူဆောင်လာသည်ကိုကြည့်ပါ) အနည်းဆုံးသုံးစွဲသူများနှင့်လူကြိုက်များမှုအရ Ubuntu နှင့်လိုက်ဖက်နိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
အတိအကျ Ubuntu မှာ ၁၁.၀၄ ရတယ်။ Ubuntu Netbook Edition တွင်သင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Ubuntu (အဓိကမူကွဲ) နှင့်မတူပါ။
Francisco Verdeja ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည် Ubuntu 10.10 တွင်ထွက်ရှိခဲ့သော version ထက် ၁၀.၁၀ တွင် Netbook များအတွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မတည်ငြိမ်၊ လေးလံ။ နှေးကွေးသော ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Francisco Verdeja ကိုပြန်ပြောပါ
OpenSUSE အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဆန်းစစ်လေ့လာတဲ့သူအားလုံးဟာသင်ဟာ xD အတိုဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရမယ်။
ကောင်းပြီ၊ လူ၊ ခေါင်းစဉ်ကဒီအတိအကျအခိုက်မှာအလေးချိန်ပိုကြီးတဲ့သူတွေ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာကာလတွေအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
Hehe ... ပထမဆုံးစာပိုဒ်ကဘာကြောင့်ရှင်းလင်းသလဲ။
ဆောင်းပါး၏ပထမစာပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာသူတို့ဘာကြောင့်ပျောက်နေတာလဲဆိုတာရှင်းနေတယ်။ သူတို့ကsurelyကန်အမှန်ဒုတိယအရစ်ကျလာလိမ့်မည်။ distros အားလုံးနှင့်အတူဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုအတူတကွပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤဆောင်းပါး၌ Archian သည် Debian ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းထားသည်။
Debian ကိုအမှန်တကယ်လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့်အမှန်တရားကတော့အနည်းဆုံးအဲဒီမှာရှိနေရမယ့်အရာအားလုံးရှိပြီးသူတို့ဟာ Linux အပြင်ဘက်မှာတကယ်လူသိများတာပဲ
စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ၁၀.၀၄ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ ၁၁.၀၄ ဖြစ်သည်
နှင့် Arch? ယခု မှစ၍ ငါသည်သူတို့ကို bookmarks bar မှဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Arch သည်၎င်းကိုလှိမ့်သောစနစ်ဖြစ်လျှင်အဘယ်ကြောင့်နေရာချသင့်သည်၊ သင့်လျော်သောဗားရှင်းများကိုဘယ်တော့မှမထုတ်ပါက၎င်းသည်၎င်း၏အချိန်နှင့်အညီ distro ကိုမည်သို့ဆန်းစစ်မည်နည်း။
ငါထင်တာကတော့ Debian ဟာဒီစာရင်းထဲမှာပျောက်နေတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Ubuntu နဲ့ Mint လိုမျိုးတခြား distros တွေရဲ့အခြေခံနှင့်အမြစ် (နှင့်မြင့်မားသော%) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ Linux ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမပါဝင်ခဲ့ဘူး၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ဘာမှမထူးတော့ Madriva (နှင့် Mageia fork) တို့၏မည်သို့ရပ်တည်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်လက်ရှိတွင်ရပ်ရွာ၌အလေးချိန်သိပ်မရှိကြသောကြောင့်တည်း။ သူတို့ကယခုသူတို့မ, အချိန်ကရှိခဲ့ပါပြီ။
သတင်းအချက်အလက်ကောင်း Arch ကဘာလို့အဲဒီမှာမရှိရတာလဲ။ configure လုပ်ရန်ခက်ခဲသော်လည်းအလွန်တည်ငြိမ်သည်။
Arch ဘာဖြစ်သွားသလဲ ၂၀၀၇ မတိုင်မီရက်စွဲများကော။ redhat debian ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်း ... ..
Mageia ရှိတယ်။ Arch လည်းမရှိဘူး။ ပြီးပြည့်စုံတယ်
gentoo, sabayon, debian, LMDE အကြောင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်စောင့်နေသည်။
Linux Mint 13 Xfce ရရှိနိုင်
ဘာမှထည့်စရာမလိုဘဲ Xfce ထဲက Gnome2menu ကိုယူပါ